Livescribe Smartpen3Black က Edition ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
Livescribe Smartpen3Black က Edition ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
က်တစ်တံနှင့်တစ်ဦးကလောင်အမည်အကြား, အ Smartpen3writes on paper but captures your notes and drawings digitally with added audio tied to your strokes
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Livescribe Smartpen3Black က Edition ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: the Pen 2.0” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, for theguardian.com on Monday 7th March 2016 07.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
The stylus is arguably the next evolution of the pen –apen without ink. အများသောသူတို့က, သို့သော်, it isastep too far, စာရွက်ပေါ်တွင်ကလောင်အမည်များထိတွေ့နိုင်သောချို့တဲ့နှင့်တစ်ဦးကဘောဘောပင်နဲ့ပတျသကျတဲ့အကောင်းဆုံးအရာများနဲ့ပြောင်းလဲ: ဒါကြောင့်မဆိုအထူးပစ္စည်းကိရိယာမပါဘဲကိုယ့်အကြောင်းကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုရေးသားနိုငျ.
ထိုကလောင်အပေါ်အခါအ LED ဆိုတာကိုပြသ, Charging, စမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ကိုချိတ်ဆက်သောအခါသို့မဟုတျအသစ်တစ်ခုကိရိယာနှင့်အတူတွဲဖို့အဆင်သင့်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Livescribe စနစ်က, အ Smartpen ရာ3တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်, အလားအလာပိုမိုအသုံးဝင်မယ့်တံတစ်ခုသို့မဟုတ်ကလောင်ဖြစ်စေထက်ရဲ့တစ်က်အိမ်တော်ဖြစ်၏.
သင်သည်အဘယ်သို့ရရှိပါသည်တစ်ဦးကလောင်အမည်တူနှင့်ခံစားတဲ့ကလောင်ဖြစ်ပါသည်, တစ်ဦးကဘောအစွန်အဖျားနှင့်မှင်နှင့်အတူစက္ကူပေါ်မှာရေးသားခဲ့သည်, ပဲမဆိုအခြား biro တူ, ဒါပေမယ့်လည်းစာမကျြနှာပေါ်တွင်သင်၏ scrawls digitises. သင်သည်အဘယ်သို့စာရွက်ပေါ်တွင်ရေးထားအတိအကျဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံစံကိုပုံတူကူးယူသည်, စာမကျြနှာဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့သို့မဟုတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲ.
ကလောင်အမည်၏အဆုံး၌ကင်မရာ, အကဘောအထက်ထုတ်ကပ်နှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ကလောင်အမည်၏အဆုံး၌တစ်ဦးကကင်မရာကိုရွေ့လျားမှုကိုခြေရာခံရန်အထူး Livescribe စက္ကူ၏စာမကျြနှာပျေါမှာသေးငယ်တဲ့အစက်ပုံစံများကိုအသိအမှတ်ပြု. ဒါဟာမဆိုအဟောင်းစာရွက်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ဆိုလိုသည်, ကသိသာပါဘူးတဲ့ကလောင်အဖြစ်ပေမယ့်, ဒါပေမဲ့ Livescribe-သဟဇာတစက္ကူပုံစံအမျိုးမျိုးအတွက်ရရှိနိုင်, မှတ်စုအပြားနှင့် Moleskine စာအုပ်များ, သို့မဟုတ်သင်တစ်ဦးလေဆာပရင်တာကိုအသုံးပြုသင့်ကိုယ်ပိုင် print ထုတ်နိုင်.
အဆိုပါငွေစက္ကူကို Bluetooth မှတဆင့်မှာ Android သို့မဟုတ် iOS ကိုစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်ပေါ်တွင် Livescribe + app ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်နေကြတယ်, ဒါပေမယ့်ကလောင်အကျင့်ကို၎င်းမှတ်တမ်းများ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ရုံဒဏ်ငွေမှတ်ချက်ပြု, သင်ကသင့်ရဲ့ smartphone ကိုမှလုပ်ကိုင်ဖို့လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်နှင့်ချိတ်ဆက်ရှိသည်ဖို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးအဓိပ်ပာယျ.
ဖမ်းမိမှတ်စုထုတ်လုပ်မှုလိုင်း-by-line ကပုံရိပ်တွေအဖြစ်ရှိနိုင်ပါသည်, as an image of the page or asaPDF and shared via any app or service you have installed on your smartphone or tablet.
Notes from page to screen. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Pencasts can be played back within the Livescribe+ app or inabrowser. The green ink writes over the greyed-out words as the recorded audio reaches that point. Tapping on any word skips to that point in the recording. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Livescribe also does handwriting recognition. Its success depends on how bad your handwriting is. It will recognise mine pretty accurately when I concentrate and write neatly. သို့သော်, it starts to struggle as my handwriting scrawls when writing at speed, which I normally am when interviewing someone.
This is the second version of the Smartpen3I have tested. ပထမဆုံး, the Moleskin edition, died after overheating. I charged it usingaQualcomm Quick Charge compatible USB charger (the pen does not come with its own power adapter), which was fine.
The control and dot pattern of the Moleskin Livescribe notebook. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အကောင်းအဆိုး: Digital notes from paper, feels likeapen, writes likeapen, Cross-platform, syncs audio to written notes, works without being attached toaphone, many sources of compatible paper, လက်ရေးအသိအမှတ်ပြုမှု
Cons: Android app not very developed, စျေးကြီး, requires special paper, first pen failed
The rubber stylus end unclips to reveal the microUSB charging port. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
App များ, အပိုဒ်, ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, နည်းပညာ
← 10 အဆိပ်အပြင်းဆုံးမြွေ [Listverse] စိုးရိမ်ပူပန်လူတွေက၏ဦးနှောက်ကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားရိပ်မိနိုင်ပါစေ →